Orodyahanka caanka soomaaliga/iswiidhishka ah ee Mustafa Maxamed, - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Farriin muhiim ah ee ku aadan bulshada Gislaved ee gobolka Jönköping
Orodyahanka caanka soomaaliga/iswiidhishka ah ee Mustafa Maxamed,
La daabacay måndag 6 augusti 2007 kl 16.24
oo jabiyey rekoorkii u dejiyey ordaaga Anders Gärderud 31 sannadood hortood.
Ordaaga Anders Gärderud oo ka qeyb qaatey cayaarihii Oloombigada ee sannadkii 1976-dii, oroddada qori ka boodka ee 3000 ee meter uuna ku hantey biladda dahabka ayuu ku ordey muddo dhan 8:08:02.Rekoorkaasi ayaa taagnaa muddo soddon sannadood kor u dhaafeysa, illaa iyo maalintii sabtida taariikhduna aheyd 28-kii bishii Juulaay oo uu jebiyey, ordaaga da’da yar ee Mustafa Maxamed, isagoona ku ordey 8:05:75.
- Waa arrin aad loogu farxo oo aan muddo hiigsanayey, ayuu sheegey Mustafa Maxamed wax kadib kolkii oradkaasi uu dhammaadey. Rekoorka cusub ee innankaasi ku jabiyey magaalada Heusden-Zolder ee dalka Beljimka ayaa sannad walba lagu qabtaa cayaar caalami ah ee oroddada qori ka boodka.
- Goolkeeygu wuxuu ahaa in aan ka mid noqodo saddexda ruux ee cayaartaasi ku guuleysata, hase yeeshee waxaan dareemey inuu orodkii ii sahlan yahey, kolkaa ayaan ku fekerey inaan middaa ka faa’iideysto, sida uu sheegey mustafa Maxamed isaga hogaanka orodkaasi ka mid noqdey lixdii boqol ee mitir ee ugu dambeysey.